रसिया र साउदी अरबबीच पहिलो खेल, कसले जित्ला विश्वकपको उद्घाटन खेल ? – Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०९:३६0
एजेन्सी, ३१ जेठ । अबको एक महिना अर्थात् असार ३१ गतेसम्म संसारको ध्यान रसियामा केन्द्रित हुनेछ । फुटबल महाकुम्भ विश्वकप २०१८ आजबाट रसियामा सुरु हुँदैछ । पहिलो खेल एसियाली मुलुक साउदी अरेबियाले आयोजक राष्ट्र रसियासँग खेल्दैछ । नेपाली समयअनुसार राति ८ः४५ बजे खेल सुरु हुनेट । आयोजक रुसको टोलीमा रक्षापंक्तिमा खेलाडीहरु घाइते रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ साउदी अरेबियाको रक्षापंक्तिमा पनि उमेर पुगिसकेका खेलाडीहरु धेरै छन् । दुवै टोली आफ्नो डिफेन्सका लागि नचिनिने भएकाले विश्वकपको पहिलो खेलमा धेरै गोल हुने अपेक्षा गरिएको छ । रुसले पछिल्ला ७ खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन । उसले अन्तिम पटक गत अक्टोबरमा दक्षिण कोरियालाई हराएको थियो । यस्तै, साउदी अरेबिया पनि पछिल्ला ३ खेलमा लगातार पराजित भएको थियो । साउदीलाई पछिल्ला तीन मैत्रीपूर्ण खेलमा इटाली, पेरु र विश्वकपको साविक विजेता जर्मनीले पराजित गरेका थिए ।
रुसले एसियासी भूमिमा भएको २००२ को विश्वकपपछि खेलेका विश्वकपका सवै खेल गुमाएको छ । साउदीले सन् १९९४ मा अमेरिकालाई हराएयता विश्वकपमा जित हात पार्न सकेको छैन । रुस र साउदी अरेबिया विश्वकपमा पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन् । विश्वकप फुटबलको इतिहासमा उद्घाटन खेलमा अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजक टिम पराजित भएको छैन ।
रसियाः एकिनफेभ, कुड्र्याशोभ, कुटेपोभ, ग्रानाट, झिरकोभ, गोलोभिन, झोबनिन, सामेडोभ, मिरानचुक, जागोएभ, स्मोलोभ
साउदी अरेबियाः अल माउफ, अल हार्बि, ओमार हसवी, ओसामा हसवी, अल शाहरानी, ओटेफ, अल फाराज, अल दवसरी, अल जसिम, अल सेहरी, अल सालवी
किन भाबुक भए सलमान ?
मेस्सीद्वारा स्पेनिस ला लिगामा चार सय गोलको कीर्तिमान